हामी कसरी आरएचए वारेन्टी कार्य गर्दछ व्याख्या गर्दछ Androidsis
अल्फोन्सो डे फ्रुटोस | | हाम्रो बारेमा, अन्य उपकरणहरू, ट्यूटोरियलहरू
तपाईं धेरैलाई थाहा हुनेछ आरएचए, ब्रिटिश कम्पनी उच्च-गुणवत्ता हेडफोन मा विशेषज्ञता। मैले पहिले नै तपाईंलाई तिनीहरूको केश समाधानहरू देखाइदिएको छु आरएचए T750, आरएचए T10 वा प्रभावशाली आरएचए T20। अब म तपाईंलाई आरएचए वारेन्टीको बारेमा भन्न चाहन्छु।
मेरो लागि, बिक्री पछि सेवा एक कम्पनीको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो र म तपाईंलाई भन्न सक्छु कि आरएचए टोलीले प्राप्त गरेको ध्यान उत्तम छ। यति धेरै कि मैले यो लेख लेख्ने निर्णय गरेको छु जहाँ म कुरा गर्ने छु कसरी आरएचए वारंटी काम गर्दछ।
आरएचएसँग एक उत्तम ग्राहक सेवा छ
एउटा चीज जुन म एप्पलको सब भन्दा ईर्ष्या गर्छु उसको बिक्री पछिको सेवा हो। यसको प्रख्यात एक बर्षे वारंटी कपर्तिनोको शक्ति हो। र मैले तपाईंलाई पहिले नै भनेको छु आरएचए को वारेन्टी अझ राम्रो छ।
र यो एक पछि पछि हो RHA को एक उत्पादनको साथ समस्या, मैले उनीहरूलाई सम्पर्क गर्ने निर्णय गरें। मैले रिपोर्ट गरेन कि म एन्ड्रोइडसिसमा सम्पादक हुँ किनकि म प्राथमिकतामा ध्यान दिन चाहन्न, तर सत्य यो हो कि मैले प्राप्त गरेको उपचार उत्कृष्ट थियो र म तपाईंलाई भन्छु कि अंग्रेजी निर्मातासँग मसँग अहिलेको सर्वश्रेष्ठ बिक्री पछि सेवाहरू छन्। देखियो।
मैले सम्पर्क गरेको अनुभव यति सकारात्मक थियो Jakub Dziewięcki, एकआरएचए खाता गणना प्रबन्धक, हेडसेट निर्माताको ग्यारेन्टीको बारेमा कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई उठ्न सक्ने कुनै पनि प्रश्नहरूको उत्तर दिन। यहाँ तपाईंसँग RH ग्यारेन्टीको बारेमा उठ्न सक्ने मुख्य शंकाका साथ प्रश्न र उत्तरहरूको एक श्रृंखला छ।
के आरएचएको ग्यारेन्टी राष्ट्रिय वा यूरोपीय स्तरमा छ? ब्राण्डको उत्पादनहरूसँग कति वर्षसम्म वारंटी छ?
RH का यसको सबै उत्पादनहरुमा तीन बर्षे अन्तर्राष्ट्रिय वारेन्टी छ।
यदि मैले एक स्थानीय स्टोरबाट एक आरएचए उत्पादन किनेको छु र समस्या छ भने कसले वारेन्टी, आरएचए वा स्टोर कि मैले उत्पादन खरीद गरेको हो?
तपाईं यो दुबै तरीकाले गर्न सक्नुहुन्छ; वा स्टोरमा जानुहोस् वा RHA मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् निर्माताको आधिकारिक वेबसाइट।
यदि म इन्टरनेटमा कुनै पनि आरएचए उत्पादनहरू खरीद गर्दछु र मलाई समस्या छ भने, म कसरी आरएचएलाई सम्पर्क गर्न सक्छु?
कुनै समस्या भएमा तपाईले सिधा मार्फत RHA को ग्राहक सेवा विभागमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ यो लिंक जहाँ तपाईं एक साधारण फारम भर्नुहुनेछ.
तपाईंको अफिसहरू ग्लासगोमा अवस्थित छन्। यदि मलाई अ English्ग्रेजी बोल्न आउँदैन भने म स्पेनिशमा सम्पर्क राख्न सक्छु?
हो, जबकि हाम्रो मुख्यालय ग्लासगो मा स्थित छ, तपाईं हामीलाई चाहानुभएको भाषामा हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। हामी विश्वभर मा ग्राहकहरु सेवा दिन्छौं कि त्यहाँ कुनै समस्या छैन।
घटनामा हामीले मर्मतका लागि आरएचएमा उत्पादन पठाउनु पर्छ, शिपिंग लागतका लागि को जिम्मेवार छ?
हाम्रो कार्यालयहरूमा शिपिंग ग्राहकले वहन गर्नेछन्, तर RH ले मर्मत गरिएको उत्पादन वा ग्राहकलाई नयाँ युनिट ढुवानीको लागत कभर गर्नेछ। हामी जहिले पनि हाम्रा ग्राहकहरुलाई एक दोषपूर्ण उत्पादन बदल्नको लागि उत्तम तरीकाको सल्लाहको लागि हाम्रो ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्न सल्लाह दिन्छौं।
उत्पादन मर्मत गर्न औसतमा कति समय लाग्छ?
हामीसँग सामान्यतया २ 24 घण्टाको पैतृक सीमाहरू हुन्छ, यद्यपि हामी सामान्यतया कम समय लिन्छौं, एकै दिनमा समस्या समाधान गर्न समेत।
यदि आरएचए वारेन्टीले उत्पाद विफलतालाई कभर गरेन भने, हामी कसरी यस्ता केसहरूमा काम गर्ने?
हाम्रो ग्राहक सेवा टीम प्रत्येक केसको व्यक्तिगत उपचारको जिम्मामा छ। समस्या जस्तोसुकै भए पनि, पहिले RHA को ग्राहक सेवा विभागलाई सम्पर्क गर्नु उत्तम हुन्छ। हामी ग्राहकहरूलाई उनीहरूको खरीदको प्रमाण बचत गर्न वा उत्पादन खरीद गर्दा तस्वीर लिनको लागि सोध्छौं र छवि बचत गर्नुहोस्। यस तरिकाले, यदि केहि गलत भयो भने, सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सहज पार्न छवि पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ किनकि हामी बुझ्दछौं कि हाम्रा सबै ग्राहकहरू तीन वर्षसम्म खरीद रसिद राख्दैनन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » अन्य उपकरणहरू » आरएचए कसरी काम गर्छ?
ग्राहक सन्तुष्टिको हिसाबले मैले अरु संसारको केही पनि देखिनँ, अर्कोतर्फ, अल्काटेल डे लाटमले तपाईले ग्राहक सेवामा टिप्पणी गरेको अनुभवलाई पार गर्छ।
क्वालकॉमले स्नेपड्रैगन वेयर ११०० चिप पहिरिनयोग्य यन्त्रहरूको लागि सुरू गर्दछ